Maitiro Ekuwana Wiricheya Chitupa - ATP & SMS
Anobatsira Technology Mushandi (ATP) inyanzvi inobatanidzwa muindasitiri yehutano. Ivo vane hunyanzvi mukupa izvo zvakafanira zvishandiso izvo zvinopa vanhu kuzvimirira uye nekuzadzisa zvido zvemunhu zvezuva nezuva. Paunenge uchinge wagona kuwana dhigirii mukugadzirisa, iwe unozogona kunyorera reATP rezinesi kuti ugone kubatsira vanhu vakaremara. Iwe unofanirwa kuve uine imwe huwandu hwamaawa akazara kuti utariswe kune iyo ATP chinzvimbo. Mukati medunhu reATP, kune mamwe mabasa anosangana nemamwe maitiro ezvidzidzo zvakadzika, seSMS, kana Kugara uye Mobility Nyanzvi. Uyu munhu anonyatsokwanisa kuudza mumwe munhu masize azvinoda uye kuti ndedzipi nzvimbo dzekugara dzinoenderana nezvavanoda. Pano pane mamwe matanho anoda kutorwa kuitira kuti atariswe se wiricheya nyanzvi.
Maitiro Ekuva a wiricheya Nyanzvi
Nzira iri nyore yekuisa tsoka yako pamusuwo maererano wiricheya certification ndeyekutarisa iyo yepamutemo webhusaiti inonzi RESNA, kuti uzvidzidzise pane indasitiri uye kuti utarise zvinodiwa kuti uve ATP kana SMS. Sezvambotaurwa pamusoro apa, ungangoda huwandu hwemaawa kuchikoro kuti utariswe sechitupa. Iko kune zvekare imwe sarudzo kune izvi, kana iwe ukaunganidza maawa akakwana uine ruzivo pamunda, senge kumeso-kumeso-vatengi vatengi. Iwe unofanirwa kufunga kudhawunirodha chikumbiro chechitupa kubva kuRISNA webhusaiti yepamutemo, pane $ 500 fizi iyo inoda kubhadharwa kuti yako application ive inoshanda. Iwe unofanirwa kuronga musangano wekukwira kumusoro kune nhanho kuenda kuSMS, iwe uchafanirwa kutora bvunzo kuti izvi zvionekwe seanokodzera se wiricheya nyanzvi. Kune zvakare mubhadharo weiyi, $ 250 mubhadharo. Chinhu chikuru nezve RESNA webhusaiti ndeyekuti zvakare inopa toni yeruzivo kana iwe uri kufunga nezvekutora bvunzo yako munguva pfupi, unogona kudzidza zvakananga pawebhusaiti kana kuipurinda kuti uite zvakakosha zvekurangarira bvunzo.
Matsotsi Anoba Trailer Yakarongedzwa neWheelchair
Kuwana nekushandisa Kunogara Kwekurapa Midziyo Mushure meKubatanidzwa Mune Tsaona
Maitiro Ekuramba Uchishingairira muWiricheya